Sein Lyan - စိ န် လျှံ: စုံထောက်ကြီးဖိုးစိန် နှင့် ဘားအံမယ် မီးလေးဇာ ၏ စိတ္တဇလူသတ်မှု
Writer Sein Lyan Time 10:56 am
ဟေးးးး တစ်ကွ ။ နေရာဦးထားတာ ။ သွားဖတ်လိုက်ဦးမယ် ။
ငရဲ ဥသွားဘီ :-(
နေရာဦးသူတွေ အရမ်းများနေတယ်ကွယ် ... ခက်တယ် .. :D
တတ်နိုင်ပါပေ့ စုံထောက်ရှော် အဲလေ. စုံထောက်ကျော် စိန်မျောက်မျောက် ရယ်။
အမှုလိုက်ရတာ တော်တော် ခေါင်းမူးနေပေါ့။
တရ်တော်တဲ့စုံထောက် ယောက်ဖိယောက်ဖသုံးယောက်ပဲ ။ နာမည်တော့ကြီး အဲလေ ပျက်ပါပီဂျာ ဟင့်ဟင့်ဟင့် ကိုယ့်စားအိုးကို ကိုယ်ပြန်ပိတ်ရလား ဟီးးး
(မိုင်လပ်ဖ်လီး ဘရားသား အရဲလေး)
ကောင်းမှကောင်း အားပေးတယ် နောက်တစ်ပုဒ် နောက်တစ်ပုဒ် .. မြန်မြန်သွက်သွက် လေး ဖြစ်နိုင်ရင် နောက် ၃ ပုဒ်လုံး တဘရိတ်တည်းသာတင် .. ဂွတ်တယ် .. ဂိုးဂိုး
ဟီးဟီး.. အဲဒီ ဓါးမနဲ့ ဆက်အခုတ်မခံရတာတောင်နည်းသေး.. အဟေးဟေး.. နောက်အပုဒ်တွေစောင့်နေပါတယ်ဗျို့..
ဆက်ပါ ဆက်ပါ အားပေးပါတယ်။ ကိုဖိုးချိန်တို့ရဲ့ စုံထောက် အရည်အချင်းကို ယုံကြည်ပြီးသားး)
အဲ ဖိုးစိန်တို့ တော်ချက် ဒီယောက်ဖသုံးယောက် ပေါင်းမှတော့ ဒီလောက်တော့ရှိမှာပေါ့။
နောက်လာမယ့်ပိုစ့်က မကြီး အပ်ထားတဲ့ အမှုနော်။ တလွဲလုပ်ရင်တော့ တွေ့မယ်။ ဘားအံမယ်လိုတော့ အကျီပါးပါး မလုပ်နဲ့နော်။ ဟီးဟီး ဖိုးစိန်ကို ကြောက်လို့ ကြိုမှာထားပါတယ်ဝေးးးးးးး
ပြောခဲ့သလိုပဲ မိန်းမချောချောလှလှ ချမ်းချမ်းသာသာ
ရပါစေတော်း)း)
အဲ..လုပ်ပြန်ပြီ ဒီအပျိုကြီးကနေကို မလွတ်ဘူး။ လျော့လျော့ပေါ့ပေါ့ရေးနော်။ ဒီအမှု့မပေါ်လို့က သေချာတယ် ဒီစုံထောက် အမှု့အပ်မဲ့သူလျော့တော့မယ်။:))
ဪ .. ဖိုးစိန် ဖိုးစိန် ..
ဘာပြောလို့ပြောရမှန်းတောင် မသိတော့အောင်
တကယ့် ကို ယဉ်ယဉ်လေး ပါဘဲလားးးး
နောင် ဘယ်တော့ သွက်သွက်ခါ လေမလည်း လို့ ..
ဖွားကိ ..( ဟင်းးးးးး သက်ပြင်းရှည်ကြီး ချသွားသည်)
ဒါပေမယ့် နေမကောင်းဘူး ခေါင်းကိုက်နေရင် ကျန်းမာ
ရေးလဲဂရုစိုက်ပါဦး။ စာတွေနေ့တိုင်းမရေးပဲ. ၁ရက်ခြား
လောက်ရေးပြီး အိပ်ရေးဝအောင်သေခြာအိပ်ပါ ဖိုးစိန်ရေ.
အဲ့မှာရီနေရတယ် ဟားဟ ဒီလူမလွယ်ပါလားနော်...........
အပေါ်အကျီ ဗလာကျင်းကျင်းမှာ ဖွံ့ဖြိုးမို့မောက်နေတဲ့ ကြွက်သားတွေနဲ့ ငှက်ပျောဖူးသဏ္ဍန် လုံးကျစ်နေသော လက်မောင်းသားက သုံးနှစ်အုန်း ပင်စည်လောက်ကအသာလေး… ညာဘက်လက်ဖျံရိုးမှာပင် ကျုပ်တို့သုံးယောက် တွဲလဲခိုလို့ရတဲ့ အနေအထား… ပေါင်တလုံးက နှစ်တရာကျွန်းပင်လို တုတ်ခိုင်ခိုင်ဆိုတော့…
ကိုလတ်ပုံကိုမြင်ယောင်မိသွားတယ် ကြောက်စရာကြီးပါလာနော် မီးမီးကြောက်ကြောက်...ဟိဟိ
ဖိုးစိန်ရေ ဖတ်ရတာရယ်ရတယ် ဟတ်ဟတ် ဆက်ရေး အားပေးတယ်
ကျန်းမာရေးလဲဂရုစိုက်ပေါ့ကွယ်နော် မီးမီးမှာအလှူအတွက် ထည့်ဖို့ပိုက်ပိုက်ကသိပ်မရှိဘူးရယ် ဖိုးစိန်အတွက်ဆိုတော့သေချာလုပ်ပေးချင်တာလေ ဟီးးးးးးးးးးးးးးးးး
ကိုဖိုးစိန် ဘယ်တုန်းကတည်းက စုံထောက် အလုပ်လုပ်နေတာလဲဗျ......။ လိုမှန်းသိ အတွင်းခံဘောင်းဘီ ပျောက်တဲ့ အမှု အပ်လိုက်ပါတယ်..။ :P
စုံထောက်၃ယောက်ပေါင်းပေလို့ပဲ ပေါချက်က တစ်ယောက်တည်းသာဆို အမှုပေါင်းသောင်းခြောက်ထောင်များရှိမလားမသိ အဟတ် မီးလေးဇာတော့သွားပါပြီနော် ည၀တ်အပါးလေးတဲ့လုပ်ရက်တယ်း) နောက်ဆိုထူထူလေးလုပ်ပါ...
နော်ထပ်ရေးဖို့ အားပေးပါတယ် ကိုကြီးးဖိုးစိန်ရယ် နောက်ထပ်နောက်ထပ်
အဟား စုံထောင်ကြီး အဲလေ မှားလို့ စုံထောက်ကြီး ဖိုးစိန် မှားတဲ့ခါလဲ မှားပေမှာပေါ့ နောက်အပိုင်းတွေ စိတ်ဝင်တစားနဲ့ အင်္ဂါဂြိုလ် ကနေ လှမ်းကြည့်နေတယ်ဝေးးး
အလွန်ကောင်းတဲ့ ပိုစ့် ပါပဲ..
နောက်ဇာတ်လမ်းတွဲတွေ ဆက်ရေးပါ.. အားပေးမယ်..း)
z လမ်းလေးရေးပုံလှပသေသပ်သည် လှည့် စားထား မှုပီပြင်၏ တချက်မကပြုံးမိသည်ဒါနဲ့ပြောပါရစေ ဦး မလွတ်တန်းစုံထောက် ဦးဖိုးစိန်ရယ် ကျနော်အပ်ထား တဲ့ အမှုတွဲလေး ဘယ်အခြေနေရောက်နေပြီလဲသိချင်ပါတယ် ဓါးထက်ထက်ရဲ့ ညီမလေးရှာပုံတော်ဆိုတဲ့ အမှုလေးပါ စုံထောက်ကြီးကအလုပ်တွေအလွန်များနေလို့မေ့့့ သွားမှာစိုးရိမ်သဖြင့် သတိပေး ၇ ခြင်းဖြစ်ပါတယ် လေးစားယုံကြည်အားကိုးမှုများစွာဖြင့် စောင်မျှော်နေသူ ဓါးထက်ထက်
ဟားဟား တော်တော်ရယ်ရတဲ့ စုံမထောက်ကိုဖိုးစိန်
သွေးကွက်တွေ့ တာနဲ့လူသတ်မှုတဲ့
ကောင်းတယ်ဗျ ဆက်ရေးပါ အားပေးနေပါတယ်...။
သယ်ရင်းရေ ရီနိုမာန် ဟိုတယ်မှာ သယ်ရင်း
နောက်ဆက်လိုက်မဲ့ အမှုတွေကို ဖတ်ချင်တယ်
အဟေဟေ ဖတ်လို့ကောင်းပါ့ျော ဆက်ရေး ဆက်ရေး...။
ဂွတ်တယ် ထင်ရင် ဒူးသာဒူး ပါ ကိုကိုစိန်ရေ
အဟား...စုံထောက်ကျော် မျောက်သုံးကောင် အဲ..ဟုတ်ပါဘူး... စုံထောက်ကျော် ဖိုးစိန်နှင့်အဖွဲ့...
ဟတ်ဟတ်... ရေးလဲ ရေးတတ်ပါ့..သူမို့လို့ ကြံကြံဖန်ဖန် ရေးတတ်တယ်... ဟွန်းးး မပြောချင်ဘူး..မပြောချင်ဘူး..ပြောကို မပြောချင်ဘူး.... (ဒေါ်မြလေး လေသံနှင့် ဖတ်ပါ)
ဟာသ ရုပ်ရှင် ရိုက်ရင်ကောင်းမယ်။
အထပ်ထပ်အခါခါ ပြုံးပီးဖတ်တယ် ဆရာစိန်ရေ၊ မျှော်မယ်နော်
စုံထောက်ကြီး ကိုဖိုးစိန်ရဲ့ 
မိုးပျံတက္ကစီတွေ ဘာတွေနဲ့ ဆိုတော့
ဒါပေမယ့် ဆက်ရေးပါ... ဖတ်လို့ကောင်းတယ်....
lovely brother ကိုဘာလို့ ခွဲရေးလဲ သိပါရစေ... လူကြီးတွေလဲ လာလည်တယ်ဆိုတာလဲ သတိထားပါဦးးဝ)
စုံထောက်ကြီး ဒီနေ့ ကံမကောင်းပါလားပေါ့...
ဖိုးစိတ်အသေချစ် အရှင်ချစ် စုတ်ပြတ်သတ်အောင် ချစ်တဲ့...
ကောင်းတယ်.... စာလုံးပေါင်းမှားတာ တစ်ခုပဲ
အမှုတွဲမှာ ကိုကြီးညီမလေး နဲ့ ယောက်ဖ အမှုရောပါအုန်းမှာလားးးးးး
ရီရပါတယ်...တခါတလေအမောအပန်းဖြေဖို့သာကောင်းပေ မယ့်...အချိန်သုံးရမှာချင်း အတူတူ...အမြဲကျန်နိုင်တဲ့စာမျိုးရေး ဖို့သာပိုအားပေးချင်ပါတယ်...ငါကတော့ပျင်းတာမို့ ဘယ် Blog မှဆက်မရေးတော့ဘူး...ဟီးးဟီးး
ဆက်ပေါပါ။ အဲလေ ဆက်ရေးပါ
ဖတ်လို့ တကယ်ကောင်း..... ဆက်ရန်တွေကို လာဖတ်ဦးမှာ....
ကောင်းလိုက်တာ.. သည်းထိတ်ရင်ဖိုကနေ.. နောက်မှ ဇာတ်ရည်လည်တော့တယ်.. ဟီး ဘယ်လိုများရေးလိုက်တာလဲဟင်....
နောက်အပုဒ်တွေကိုလည်း စောင့်ဖတ်မယ် ဒါပဲ..
ပီားပိာပိာ အရမ်းရယ်ရတာပဲ၊ မမ မီးလေးဇာ ရေးထားတဲ့ကဗျာလေးတောင်မလွှတ်ဘူး :P အားပေးနေမယ်နော်။ဆက်ရေး။မိုက်တယ်။
ထင်ပါတယ်.... ဘယ်လို လွဲမလဲလို့ ရင်တစ်ထိပ်ထိပ်နဲ့ 
နည်းနည်းလေး လွဲသွားတယ်နော်... :P
ဟီဟိ...ရယ်ရတယ်....ကိုကြီးဖိုးစိန်...ဆက်ရေးးးနေမကောင်းတာလေးတောင်ပျောက်ချင်ချင်ဖြစ်သွားတယ်...ရယ်ရလို့ ... :-)
"စုံထောက်ကြီးဖိုးစိန် နှင့် ဘားအံမယ် မီးလေးဇာ ၏ စိတ္တဇလူသတ်မှု"
ကိုရီနိုကြီး သတင်းအစအနမရပဲ ပျောက်သွားတဲ့အမှု
စိတ်ချ လက်ချ ယုံယုံကြည်ကြည် အားကိုးပြီးတော့ အပ်ပါတယ် .. :P
အမှုရှိရင် နဘေးက လိုက်ပြီး ပညာယူပါရစေ ဆရာကီး စိန်။
အသစ်တွေ ရေးပါတော့ဗျို့ 
ဒါမှမဟုတ်တစ်ခုခုတော့ အကြောင်းပြန်ပါဗျို့ 
အီဖေကိုယ် လက်စ်စ်စ်တ်တ်တ်။ အဟိ။
ကိုရဲက တစ်ဆို ကိုယ်က ဘိတ်ချေးလေ။ ငှဲငှဲ။
နောက်အမှုတွေမှာ အပျိုကြီးတွေကို များများသာဆော် သိလား ကိုဂျီး။ အားပေးနေတယ်။ အဟီး။
( အချွန်နှင့် မခဲ့သည်။ ခွိခွိ )